Isiphequluli SakwaMidori: Ngoba akuyona yonke into eyiFirefox neChromium | Kusuka kuLinux
Isiphequluli SakwaMidori: Ngoba akuyona yonke into eyiFirefox neChromium
Bengilokhu ngisebenzisa i- Firefox (futhi ngicabanga ukuthi ngizoqhubeka nokuhlala isikhathi eside), yize ngisebenzisa njalo ngezikhathi ezithile Opera y Chromium.
Kepha cishe sihlala sikhohlwa ezinye izindlela ezifana Midori, isiphequluli esincane esizuza abalandeli ngezinzuzo zaso, futhi akumangalisi. Ngokwami ​​bengingakufanelekela kuphela ngamagama ama-2: Ultrafast y Kukhanya.
Uma ucabanga ukuthi ngenza ihaba futhi ngisebenzisa Ukuhlolwa kwe-Debian, kufanele bavule ukuphela bese uthayipha:
futhi niyabona ukuthi ngikhuluma ngani.
Njengamanje ngibhala lokhu okuthunyelwe kusuka ku- UMidori 0.4.1 ngibe nesibindi sokusho, ukuthi ngiyibona ishesha kakhulu kune I-Opera-Okulandelayo 12, I-Chromium 14 y I-Firefox 7.0.1.
Kulungile, akuyona i-panacea futhi. Inezandiso ezimbalwa kakhulu futhi kwesinye isikhathi kunemininingwane emincane ekuziphatheni engingakuthandi kancane. I-interface ifana kakhulu naleyo ye- Chromium, nakuba ama-eyelashes azizwa eqinile kakhulu (mhlawumbe yisihloko se-gtk), kodwa akukho okungakhuthazelelwa. Futhi lapho usebenza nemifanekiso kudeshibhodi WordPress, ilingana ne- Opera akubekezeleleki.
Kepha konke lokhu kungathetheleleka ngokuthi ilayisha ngokushesha kangakanani amakhasi ewebhu. Eqinisweni ngiyakhumbula kungekudala esikhathini se- Ukuhlolwa kwe-Acid, ihambe kahle kunezinye iziphequluli. Futhi nokusetshenziswa okuphansi kwemithombo.
UMidori ufaka izinjini zokusesha eziningana, imenyu ehlanganisiwe I-Chrome, futhi ingalungiswa ngendlela elula, ivumelanise ukusebenza kwayo ukuze ifihlwe njengezinye iziphequluli. Kuyafaneleka ukuzama futhi ukufakwa njengenye indlela.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Aplicaciones » Isiphequluli SakwaMidori: Ngoba akuyona yonke into eyiFirefox neChromium
UMidori ubelokhu engikhipha ezinkingeni lapho ngine-PC ehamba kancane, kwi-slitaz distro bayifaka njengesiphequluli esizenzakalelayo ngenxa yokukhanya kwayo. Uma ngikhumbula kahle, ine-adblock plugin nezinye izinketho eziyisisekelo ezigcwalisa okuthe xaxa ngokuba nakho kusebenza. Kuhle ukunikezela isikhala ku-midori lapha ku-desdelinux, imikhonzo! 🙂
Bengilokhu ngibona ukuthi kukhona i-plugin umsebenzi wayo ukunikeza abasebenzisi ithuba lokufaka ama-plugins abo, noma ama-plugins wesithathu (ngicabanga). Lokho kungenye yamandla weFirefox, iChannel kanye neOpera, eyabona ukuthi sekwephuze kakhulu.
Ngisanda kufaka iMidori eW Wheezy kepha uma ngifuna ukufaka ibhukumaka isiphequluli siyavalwa, awunayo le nkinga?
Impela. Kwenzeka into efanayo kimi 🙁
UMidori akasona isiphequluli esizinzile esingu-100%, akuyona inkinga yakho, kepha yisiphequluli
Impela. Nali iphutha elinginika:
Eqinisweni, ngisebenzisa uMidori okwamanje, angazi ukuthi yisiphi isiphequluli sewebhu esizongithola, kepha ngokusobala i-distro engiyisebenzisayo ayingitholi.
IMidori eza noDebian ibinenkinga exazululwe lapho ngihlanganisa inguqulo yakamuva ekhasini layo elisemthethweni, ngiyincoma kakhulu.
Futhi ngesiJapane Midori kusho okuluhlaza,
Sibona imiphumela yokuwa
IGnome 3.2.1: Ukulungiswa kwephakeji / imodyuli kuphela